အဘယ်ကြောင့်ရထားစီးနင်အီတလီနိုင်ငံကိုကြည့်ပါရန်အကောင်းဆုံးနည်းလမ်းဖြစ်ပါတယ် | တစ်ဦးကရထား Save
နေအိမ် > ရထား Travel အီတလီ > အဘယ်ကြောင့်ရထားစီးနင်အီတလီနိုင်ငံကိုကြည့်ပါရန်အကောင်းဆုံးနည်းလမ်းဖြစ်ပါတယ်
သငျသညျခရီးသှားဖို့ဘယ်လိုဆုံးဖြတ်တဲ့အခါသင်ရွေးချယ်စရာဝန်တို. နာမည်ကျော်ရုပ်ရှင်၏အမည်လိုပဲ, သငျသညျကနေတဆင့်သွားနိုင်ပါတယ် လေယာဉ်, ရထား, နှင့်မော်တော်ကား. ဘယ်အချိန်မှာအဲဒါကိုယူပြီးမှကြွလာ အီတလီ၏ခရီးစဉ်, သို့သော် – ရထားစီး။ သွားရန်အချို့သောအခွင့်အရေးများရှိသည်.
လေကြောင်းလိုင်းထိုင်ခုံအတိုပေါ်နာမည်ဆိုးများမှာ legroom, သငျတို့သ takeoff နှင့်ဆင်းသက်စဉ်ကာလအတွင်းအီလက်ထရောနစ်ပစ္စည်းတွေသုံးစွဲဖို့ခွင့်ပြုမထား. ဤသည်တိုတောင်းလေယာဉ်ခရီးစဉ်များအတွက်ကိုဆိုလိုပါတယ်, သငျသညျကကမ်းလှမ်းအာရုံပြံ့လှငျ့မပါဘဲလေယာဉ်များ၏အများစုအဘို့သင့်သေးငယ်တဲ့ထိုင်ခုံမှချုပ်ထားပါတယ် စမတ်ဖုန်းများ နှင့် နည်းပညာ, this is really different fromatrain ride.
ကားများမကြာခဏအနည်းငယ်ပိုအာကာသပေး, ဒါပေမယ့်စီး bumpy နိုင်ပါတယ်နှင့်အချို့သောလူတွေကကားတစ်စီးအနာရောဂါခံစားနေရ – အထူးသဖြင့်တစ်ဦးအပေါ် ခရီးရှည် သငျသညျဂိမ်းများကိုဖတ်ခြင်းသို့မဟုတ်ကစားရန်လိုပေမည်သည့်အခါ. ရထားစီး, သို့သော်ငြားလည်း, အဆင်ပြေထိုင်ခုံနှင့်ချောမွေ့စွာစီးနင်းပေးပါသည် – ရှည်လျားသော takeoff နှင့်ဆင်းသက်အဆအားဖြင့်မပြတ်မတောက်, နောက်တဖန် ကွဲပြားခြားနားသောအတွေ့အကြုံ fromatrain ride.
အီတလီမှာရထားစီးနေဖြင့်ခရီးသွားလာသည့်အခါ, သငျသညျအလွန်အမင်းပုကြိုးစားနိုင် အဆင်ပြေ Ergonomics ထိုင်ခုံများနှင့်သစ်ကို၏အသံသည်-proofed Cabin အရှိန်အလွန်မြန်သော Frecciarossa 1000 မီးရထား.
Air ကိုခရီးသွားအံ့မခန်းဝေဟင်အမြင်များကမ်းလှမ်း, ဒါပေမယ့်တစ်ခုသာတိုတောင်းသောအချိန်များအတွက်လေယာဉ်ဝေးအထက်တက်သည်အထိ ကျေးလက်. အဝေးပြေးလမ်းမှာဖြစ်တယ်လို့များသောအားဖြင့်ပါမဟုတ်ပေမယ့်, မြို့ကြီးများအကြားလမ်းများပူဇော်နိုင်ပါတယ် အလွန်ကောင်းမွန်တဲ့အမြင်များ. သို့သျောလညျး, ယာဉ်မောင်းလမ်းပေါ်အာရုံစူးစိုက်ရှိပါတယ်, ဒါကြောင့်သာအခြားခရီးသည်ကိုလှိမ့တောင်ကုန်းမှာအံ့ဩနိုင်သည်သို့မဟုတ် လှပသောသမုဒ္ဒရာ. ရထားစီးနင်းအားလုံးခရီးသွားများအတွက်ပြတင်းပေါက်အပြင်ဘက်သဘာဝအလှအပခံစားရန်ခွင့်ပြု.
ရထားခရီးအတွက် အီတလီနိုင်ငံအထူးသဖြင့်လှပသောများမှာ so make sure you travel along the Cinque Terra between Levanto and La Spezia, သို့မဟုတ် Catania မှ Rimini ကနေအရှေ့ဘက်ကမ်းရိုးတန်းခရီးစဉ်ကိုဆင်းယူ.
ရထားစီးခရီးသွားဖြစ်ပါတယ် ပိုပြီးတတ်နိုင် ပျံထက်. မော်တော်ကားငှားရမ်း ကုန်ကျ-ထိရောက်သောနိုင်ပါသည်, ဒါပေမဲ့အခါသင် အာမခံ add, ဓာတ်ငွေ့, အချိန် (အချိန်ပိုမိုမောင်းနှင်မှုကိုပိုမိုဆိုလိုတယ် နေရာထိုင်ခင်း၏ည) သင့်ရဲ့ခရီးစဉ်ကိုအစာရှောင်ခြင်းစျေးကြီးရနိုင်. သင်တို့သည်လည်းတစ်နေ့ချင်းညချင်းရထားစီးနင်းယူနိုင်ပါသည်, သင်တဦးတည်းအတွက်နေရာထိုင်ခင်းများနှင့်သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးအတွက်ပေးချေကြောင်းလမ်း.
Rimini, La Spezia မှရထား
ရထားဝေးနည်းပါးလာထုတ်လွှတ်မှု ကာဗွန်ထုတ်လွှတ်မှု than planes or cars. လေ့လာမှုတစ်ခုအရ, ကားများနှစ်ဆထုတ်လွှတ် CO2 ပမာဏ than trains do.
လေယာဉ်အများဆုံးဖြစ်ပေါ်စေ ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာသက်ရောက်မှု. ပျံအကြားရွေးချယ်ရာတွင်တစ်ခုသို့မဟုတ်မီးရထားယူပြီးတဲ့အခါမှာ, ဒီစဉ်းစားပါ: လေယာဉ် takeoff နှင့်ဆင်းသက်ဘို့မိမိတို့လောင်စာဆီအများစုအသုံးပြုနိုင်သည်. ဒီခရီးရှည်ပျံသန်းမှုများမှာ၏အရှည်ကိုကျော်ထွက် evens နေစဉ်, ကကီလိုမီတာနှုန်းအများကြီးပိုပြီးလောင်စာတိုတောင်းလေယာဉ်ခရီးစဉ်အတွက်အသုံးပြုသည်ကိုဆိုလိုသည်, ထိုကဲ့သို့သောအီတလီနိုင်ငံအတွင်းခရီးသွားလာအဖြစ်.
ကြောင်းအပြင်, လူအများစုကားတစ်စီးသို့မဟုတ်တက္ကစီများကလေဆိပ်မှခရီး, သူတို့ရဲ့စုစုပေါင်းဖို့ပိုကာဗွန်ထုတ်လွှတ်မှုဖြည့်စွက်. ဤသည်ကတိုတောင်းတဲ့လေယာဉ်ခရီးစဉ်တစ်ခုသို့မဟုတ် drive ကိုထက်တစ်ဦးအချင်းချင်းရထားစီးနင်းယူဖို့ပိုပြီးသဘာဝပတ်ဝန်းကျင်အသိစေသည်ကိုဆိုလို.
ဘေးဖယ်ဓာတ်ဆီနှင့်ဒီဇယ်အသုံးပြုမှုအနေဖြင့်, ဆူညံသံနှင့်လည်းမရှိ လေထုညစ်ညမ်းမှု, အဖြစ်ထားပြီးအစိမ်းရောင်နေရာများကင်းမဲ့ကြောင်းမြို့ကြီးများအတွက်ယာဉ်ရပ်နားကားများဘို့လိုအပ်ကြောင်း.
Safe Training စီးနငျးတိုကျခိုကျ
ခရီးသည်-မိုင်နှုန်းသေဆုံးမှုတိုင်းတာခြင်းလိုက်တဲ့အခါ, ပျံထက်အများကြီးပိုမိုလုံခြုံပါသည် မောင်းနှင်မှု. ဤတွင်အဘယ်ကြောင့်ဖွင့်: လူ့အမှားနည်းအခွင့်အလမ်းရှိပါတယ်, နှင့်ယာဉ်မောင်းလိုင်စင်ရရရှိရန်ထက်လေယာဉ်မှူးတစ် ဦး ဖြစ်ရန် ပို၍ ခက်ခဲသည်. ရှည်လျားသော drives တွေကိုအပေါ်အကောငျ့ကိုလမ်းအခြေအနေနှင့်မောပန်းခြင်းသို့ယူပါ, လေယာဉ်ရွေးချယ်ရာတွင်ကားတစ်စီးထက်ပိုမိုလုံခြုံသည်အဘယ်ကြောင့်ကြည့်ဖို့လွယ်ကူသောကြောင့်ဖွင့်.
ရထားနှင့်နှိုင်းယှဉ်ပါ, သို့သော်, လေယာဉ်အန္တရာယ်ကင်းအဖြစ်အတော်လေးမဟုတ်. ရထားနှေးကွေးအမြန်နှုန်းမှာလမ်းကြောင်းတလျှောက်သွားလာ, လေယာဉ်နှင့်နှိုင်းယှဉ်ပါ crashing နည်းအခွင့်အလမ်းလည်းမရှိအဓိပ်ပာယျ. တစ် ဦး derailment ၏ဖြစ်ရပ်အတွက်, အဆိုပါနှေးကွေးအမြန်နှုန်းလျော့နည်းအန္တရာယ်ဆိုလို.
Florence Rimini မှရထား
မီလန် Rimini မှရထား
ဗင်းနစ် Rimini မှရထား
အကြောင်းကိုပျမ်းမျှအဝေးပြေးလမ်းမှာဖြစ်တယ်လို့လမ်းသွားရွေ့လျား 2,500 တစ်နာရီကလူ – ပုံမှန်ရထားလိုင်းကိုသယ်ဆောင်နိုင်ပါတယ်စဉ် 50,000 တစ်နာရီကလူ. ဤသည်မောင်းနှင်မှုထက်သိသိသာသာမြန်ရထားစီးခရီးသွားစေသည်, သငျသညျနှေးရွေ့လျားယာဉ်ကြောထဲမှာဆခွဲကိန်းအထူးသဖြင့်လာသောအခါ, လမ်းများရပ်တန့်, ယာဉ်အသွားအလာအလင်းအိမ်နှင့်မလွှဲမရှောင်မှားယွင်းတဲ့အလှည့်. ထိုအရာ၏ထိပ်တွင်, ယာဉ်မောင်းလမ်းကိုအာရုံစိုက်ဖို့ရှိပါတယ်, ဒါကြောင့်သူတို့ဖတ်ရှုနိုင်ခြင်းဖြစ်လိမ့်မယ်, လေ့လာချက်, အိပ်, သို့မဟုတ်အလုပ်.
ပိုမြန်ရထားဖြင့်ခရီးသွားလာထက်ရှည်လျားအကွာအဝေးဖြစ်နိုင်သည်ပျံ, ဒါပေမဲ့တိုတောင်းသောအကွာအဝေးများအတွက်, လေကြောင်းခရီးသွားအချိန်ကုန်သက်သာပါဘူး. ပဌမ, သငျသညျလေဆိပ်ရနျလိုအပျ – မကြာခဏဝေးလူနေအိမ်ဧရိယာများအနေဖြင့်တည်ရှိပြီး. သင်၏အတက်မတက်မီအနည်းဆုံးတစ်နာရီကြိုတင်ပြီးလုံခြုံရေးကိုစစ်ဆေးရန်လိုအပ်သည်. အကယ်. သင်က အိတ်စစျဆေး, သင်ဝိုင်းလေးမှာစောင့်ဆိုင်းဖို့လိုအပ်ပါလိမ့်မယ်. ထိုမဆိုလေယာဉ်ခရီးစဉ်နှောင့်နှေးသို့မဟုတ်လေဆိပ်ဆိပ်ကမ်းများနှင့်တံခါးတို့အကြားလမ်းလျှောက်သို့မဟုတ်ဘတ်စ်ကားအလုံးစုံတို့ကိုရှေ့တော်၌ဖွင့်.
လေဆိပ်မကြာခဏမြို့ပြင်တည်ရှိပြီးနေကြတယ်, သငျသညျဆင်းသက်တစ်ချိန်ကအဓိပ်ပာယျ, သင်ဆဲကားတစ်စီးယူဖို့လိုအပ်ပါလိမ့်မယ်, ဘတ်စ်ကား, သို့မဟုတ်မြို့တော်သို့လေ့ကျင့်. ဘယ်အချိန်မှာကမြင်ကွင်းများကိုမြင်လျှင်မှကြွလာ, မြို့စင်တာများအတွက်လမ်းများ congested နိုင်ပြီး access ကိုရန်ခက်ခဲ ကားဖြင့်, ဒါကြောင့်တစ်ဦးရထားယူပြီးမြို့ပြဒေသများရှိအသိတွေအများကြီးစေသည်.
အဘယ်သူမျှမဘွတ်ကင်အခကြေးငွေနှင့်အတူရထားစီးလက်မှတ်ကိုဝယ်ခြင်းငှါရှာဖွေနေ? အလည်အပတ် SaveATrain.com t ကိုo ဈေးအပေါဆုံးရထားနှုန်းထားများ access.
သင်သည်သင်၏ site ကိုပေါ်ကိုကျွန်တော်တို့ရဲ့ဘလော့ဂ်ပို့စ် embed လုပ်ဖို့ချင်ပါနဲ့, ထို့နောက်ဒီနေရာကိုနှိပ်ပါ: http://embed.ly/code?url=https://www.saveatrain.com/blog/why-a-train-ride-is-the-best-way-to-see-italy/ - (အဆိုပါ Embed Code ကိုကြည့်ဖို့အောက်ကိုဆင်း)
environmentallyfriendly longtrainjourneys ရထားခရီးသွား travelitaly